पाकिस्तान र नेपालमा सीमित पर्वतारोहण – My CMS
पाकिस्तान र नेपालमा सीमित पर्वतारोहण
‘नेपाल आइडल सिजन–३’ को उपाधी सज्जा चौलागाइँ ले जितिन
‘ब्ल्याक पेंथर’ स्टार चाडविक बोसम्यानको क्यान्सरबाट ४३ वर्षको उमेरमा मृत्यु
प्यान (PAN) कार्डका लागि अनलाईनमा कसरी आवेदन दिने?
कोरोना भाइरस महामारी: मदिरा उपभोगमा क्रान्ति ल्याउँदै नयाँ पुस्ता
टिकटक: माइक्रोसफ्टको प्रस्ताव अस्वीकार, अब ओरकलले किन्न सक्ने
नेपाल भरि थप १,४५४ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण, पाँच जनाको मृत्यु
कंगनाको कार्यालय डोजर लगाएर भत्काइयो
नेपाल, भाद्र १७: काठमाडौंका स्थानीय समाचारपत्रहरूले दैनिक मृत्यु हुने र कोभिड-१९ का घटनाक्रमको शीर्षकमा हेडलाइटहरू राखेका थिए। नेपालको संस्कृति, पर्यटन, र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बहराइन सेनाका १५ पर्वतारोहीहरूको टोलीलाई अनुमोदन गरेको थियो। बेलायतबाट दुई पर्वतारोहण अभियानहरूको लागि। यसैबीच पाकिस्तानमा यस गर्मीमा धेरै साना टिमले सफलता हासिल गरेका छन।
राजमार्ग बहरेन प्रिन्स द्वारा संचालित हो। सबै सदस्यहरूको परीक्षण गरीनेछ र हेलिकोप्टरबाट चढ्नु अघि काठमाडौंमा सात दिनसम्म अलग राख्नु पर्छ। तिनीहरू मानसलुमा जानु अघि लोबचेमा प्रशस्त हुनेछन्। उनीहरू २०२१ को वसन्तमा सगरमाथाको प्रयास गर्ने योजनामा ​​छन्। बहरानीहरू सेप्टेम्बर १५ मा चार्टर उडानमा आइपुग्नेछन्। रोयल गार्डबाट १८ सदस्यीय बहरेन सैन्य अभियानको नेतृत्व बहरेनी शाही परिवारका सदस्य शेख नासेर बिन हमद अल खलिफा, बहरीन ओलम्पिक समितिका अध्यक्ष र बहनका शाही रक्षकका कमान्डर र सरकारको सर्वोच्च परिषदका प्रमुखको नेतृत्वमा हुनेछ। युवा र खेलकुदका लागि। ३० अभियानहरू अनुमोदनको लागि पर्खिरहेका छन्, त्यसैले यो अपवाद हो। सरकारले अझै पनि देशमा पर्यटक अनुमति छैन। सायद अनुमति शुल्क सामान्य भन्दा बढी थियो? समाचार रिपोर्टले बहराइनको शेख नासेरले शेर्पस र उनीहरूका परिवारलाई महामारीको कारण यस वर्ष काम नगरी रहेका ‘चामल लगायतका खाद्यान्न आपूर्ति’ दान गर्ने योजनालाई उद्धृत गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो र राम्रोसँग जडित सात समिट ट्रेक्सले शेर्पा र रसद समर्थन प्रदान गर्ने छ।
भर्खरका समाचार रिपोर्टका अनुसार चार्टर र नियमित यात्री उडानहरू सेप्टेम्बर १ मा पुनः सुरु हुने छ, तर केवल नेपालीहरू र कूटनीतिक नियोगहरूका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र संघ र विकास साझेदारहरू मात्र नेपालमा उडान गर्न पाउने छन। सरकारले अर्को सूचना नभएसम्म विदेशी पर्यटक प्रतिबन्धित गर्नेछ। दैनिक आगमनहरू पनि ८०० व्यक्तिको लागि थपिएको छ।सेप्टेम्बर २, २०२० सम्म नेपालमा ४१,६४९ पुष्टि भएका घटनाहरू र २५१ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा यो भाइरसको ५,००० भन्दा बढी सक्रिय केसहरू छन्। रिपोर्टहरू भन्छन् कि त्यहाँ कुनै महत्वपूर्ण केयर बेडहरू उपलब्ध छैनन् वा बिरामीहरूको लागि अलग अलग सुविधाहरू छन्। खाडी राज्यमा कार्यरत ४०,००० भन्दा बढी नेपालीसँग नेपाल र बहरिनको घनिष्ट सम्बन्ध छ। चार्टर उडानहरू दुई देशहरू बीच पुनः सुरु भएको छ तर विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सीमित थियो।
धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गाईडहरूले २०२० को लागि पाकिस्तानलाई लिखित बन्द गरेका छन् तर त्यहाँ केहि साना समूहहरू छन्। जर्मन मालिक / SummitClimb.de को अपरेटर, फेलिक्स बर्ग, पाकास्तानी अल्पिनिष्ट्ट मिर्जा अली बेग संग सेनामा सामेल, अगस्त २०, २०२० मा शिमशालमा ५७७० मीटरको पहिलो आरोहण पूरा भयो। उनीहरूसँग तीन जर्मन ग्राहक थिए। टोलीले अर्को पर्वतारोहण नगरेको र नाम नभएको शिखरमा गयो, यो ६,१०५ मिटरमा।